Taunggyi Time (တောင်ကြီးတိုင်းမ်): 2013
တောင်ကြီးမြို့တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် စာပေဟောပြောပွဲနှင့်ရံပုံငွေဈေးရောင်းပွဲတော် ကျင်းပမည်
ခွန်ရာဇာ (တောင်ကြီး) | ဒီဇင်ဘာ 24, 2013 | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအသင်း (တောင်ကြီး) မှစုစည်းကျင်းပမည့် ပထမဆုံးအကြိမ် စာပေဟောပြောပွဲ နှင့်ရံပုံငွေဈေး ရောင်းပွဲတော်ကြီးကို ဇန်န၀ါရီ ၂ ရက်နေ့တွင်မြို့နယ်ကျောက်တိုင်အားကစားကွင်းတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးတွင် EITI နှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်
ခွန်ရာဇာ (တောင်ကြီး) | ဒီဇင်ဘာ 24, 2014 | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းအလိုက် EITI (Extractive Industry Transparency Initiative) လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် CSO များ၏ အခန်း ကဏ္ဍမြင့်တက်လာစေရန်၊ CSO များကEITI ကိုသိရှိလာနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံသဘာဝသယံဇာတ တူးဖော်ထုတ်လုပ်ဖော်ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများတွေ့ဆုံပွဲကိုဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက် တောင်ကြီးမြို့ Classic ခန့်မတွင် ကျင်းပ ကြောင်းသိရသည်။
ပအိုဝ်းအရေး တောင်ပေါ်-မြေပြန့်က ပအိုဝ်းလူငယ်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ခွန်ရာဇာ (တောင်ကြီး) | ဒီဇင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၃ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ပအိုဝ်းလူငယ်အဖွဲအစည်းအသီးသီးမှ အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းစေရန်နှင့် တောင်ပေါ် မြေပြန့် စည်းလုံးညီညွှတ်မှု ရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ လူငယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတရပ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက် ဂနိုင်ရေးရပ်ကွက်ရှိ တပေါင်းကွင်း ပအိုဝ်းဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းရှိ ခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပထမဆုံးအကြိမ် ဒီမိုကရေစီစကားဝိုင်းတောင်ကြီးတွင် ကျင်းပ
ဒါနရှေ့ဆောင်အဖွဲ့၊ PNO ပါတီနှင့် ကျားဖြူပါတီတို့ပူးပေါင်းကာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဒီမိုကရေစီ စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို တောင်ကြီးမြို့နယ် ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုခန်းမတွင်ဒီဇင်ဘာ ၁၉ရက်တွင်ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပလောင်အုပ်ချုပ်ရဒေသ မန်တုံမြို့နယ် ရဲတပ်သား သုံးဦး သတ်ဖြတ်ခံရ
ရက်စွဲ။ ။ ၃၀ ရက် မေ ၂၀၁၃
ယမန်နေ့ ၂၉ ရက် ညနေပိုင်း ၆ နာရီဝန်းကျင်တွင် ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရဒေသ မန်တုံမြို့နယ်မှ မန်ပါတ်ရွာရှိ ရွှေလီတာဝါလျှပ်စစ်တာဝါတိုင်စောင့် တာဝန်ကျသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် (၃)ဦး ပစ်သတ်ခံရသည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
By Kanbawza Win | May 26, 2013
In Burma young people got married through love but lamentably I discovered that in West some people got married for their mutual convenience. Once the inconvenience set in they usually parted their ways without any remorse. This seems to be the case of America and Burma now that President Thein Sein has met with President Obama at the White house the marriage of convenience has been sealed.
ပအိုဝ်းသံဃာတော်များ ဦးစီးသော ပအိုဝ်းစာပေပြန်ပွားရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းဖွင့်
ခွန်ရာဇာ (တောင်ကြီး) | မေလ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ပအိုဝ်းအမျိုးသားဗဟိုသံဃာတော်အဖွဲ့ ဦးဆောင်ဖွင့်လှစ်ပြီး တစ်နှစ်တစ်ခါကျင်းပပြုလုပ်သော ပအိုဝ်းတစ်မျိုးသားလုံးအတွက် ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ဗုဒ္ဒဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် ၂၉ ကို မေလ ၂၃ ရက်နေ့ ပင်လောင်းမြို့ ပင်ခွန်ကျေးရွာတွင် စတင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိသည်။
အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးရေး အသုံးမပြုသည့်အတွက် မတရားသိမ်းထားတဲ့မြေ ပိုင်ရှင်များဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်
ခွန်ရာဇာ (တောင်ကြီး) | မေလ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခု | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO) အဖွဲ့အစည်းမှ စံပြစိုက်ပျိုးရေးကွင်းအဖြစ် မတရားသိမ်းဆည်းထားသော တောင်ကြီး-ဖက်ကွန် လမ်းမဘေးရှိ မြေယာများကို မေလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မြေသိမ်းခံရသူ ဒေသခံရွာသားများ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင် ထွန်ယက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
တောင်ကြီးမြို့တွင် ၀က်လိုင်စင်ကိုင်ဆောင်ပြီး ဘီးခွန်ကောက်
နှင်းသစ္စာ (TGI) | မေလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၃ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
တောာင်ကြီးမြို့မြောက်ဘက်ရှိ ကျေးရွာများမှ မြို့အ၀င်တွင် ဂိတ်ဆောက်လုပ်ပြီး ယာဉ်စီး၍ ဖြတ်သန်းသွားလာသူများကို ဘီးခွန်ကောက်သည်ဟု ဖြတ်သွားဖြတ်လာသူ ဒေသခံများက ပြောသည်။